Zanak’olona somary sahirana izy io. Mahagaga anay fa ohatra ny vitavita ho azy tsy misy resaka mihitsy ilay izy, ary toa tratran’ny ramatahora ireo fianakaviana ka tsy afa-manoatra, hoy ny mpiray vodirindrina aminy. Nilazana fotsiny ny fianakaviana hoe: “alaivo ny fatin’ny havanareo fa tratry ny arrêt du Coeur”, ary kafe sy siramamy no nateriny fa na tamin’ny fiandrasam-paty aza tsy misy ny na inona na inona, hoy fitarainana. Marihina fa efa manambady aman-janaka io tovolahy io. Tena tsy rariny mihitsy ilay izy, ka izay no hanairana ny manampahefana, hoy ny antso avo eo anatrehan’ity toe-javatra ity. Raha ny loharanom-baovao akaiky ny zandary kosa, dia voasambotra noho ny asa ratsy teny Ambohimanala izy io. Tafatsoaka ny namany roa fa izy kosa no tratra, izay mbola niaraka tamin’ny sabatra lava lela. Ny nahavariana ireto zandary dia tovolahy fanirakiraka ao amin’ny borigady izy ary namana mihitsy aza raha ny fanampim-panazavana. Ny zoma hifoha ny sabotsy, araka ny filazan’ilay olona iray toerana taminy tao dia hoe nihetsika ny aretiny (mihinjitra ohatran’ireny voan’ny andro be ireny) ka navoaka haingana nentina tao amin’ny CSB II Andoharanofotsy, saingy tsy avotra ny ainy. Tsy mampino izany, fa olona salama tsara izy, hoy ny an-daniny. Samy manana ny ambarany izany ny zandary sy ireo akaiky ity tovolahy ity, ka tokony hisy fanadihadiana lalina hivoahan’ny tena marina satria nisy ain’olona nafoy tao anatin’ny raharaha.